▄ မဇ္ဈိမဒေသ လွတ်လပ်ရေး – Min Thayt
• Freedom at Midnight by Larry Collins and Dominique Lapierre
• သန်းခေါင်ယံ အိန္ဒိယလွတ်လပ်ရေး ၊ မင်းကျော်စွာ (ဘာသာပြန်)
• လောကသစ် စာပေ၊ ၂၀၁၉ ၊ ပထမအကြိမ်။
• သန်းခေါင်ယံ လွတ်လပ်ရေး ၊ မောင်ပေါ်ထွန်း (ဘာသာပြန်)
• ရာပြည့်စာပေ၊ ၂၀၁၆၊ တတိယအကြိမ်။
အိန္ဒိယ လေ့လာရေး (India Study) လုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံး စာအုပ်။ နေရူးရေးတဲ့ အိန္ဒိယကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း (discovery of India) ဆိုတဲ့စာအုပ်နဲ့ ယှဉ်တွဲဖတ်ရင် ပိုပြည့်စုံနိုင်မယ်။ ပိုပြီးဆက်စပ်နိုင်လိမ့်မယ်။ သူ့ချည်း သက်သက်ဖတ်ရင်လည်းကောင်းပါတယ်။ နောက်… တွဲပြီး ဖတ်စရာတွေ ရှိသေးတယ်။ ဂန္ဓီရဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိ။ နေရူး ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ လျှပ်တပျက် ကမ္ဘာ့သမိုင်း…. စသည်ဖြင့်။
အိန္ဒိယကို မြန်မာတွေက မဇ္ဈိမဒေသလို့ ဝိဂြိုလ်ပြုတယ်။ ဂေါတမ ဗုဒ္ဓ ရဲ့ ဖွားမြင်ရာ၊ ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်ရာဒေသလည်းဖြစ်တယ်။ လူသားယဉ်ကျေးမှုသမိုင်း မြင့်မား၊ ကြာရှည်မှုဟာ မဇ္ဈိမဒေသမှာ ရှိတယ်။ ဒီလို သမိုင်းအားဖြင့် ရှည်ကြာ၊ ကြီးမြင့်တဲ့ တိုင်းပြည်ကြီးဟာ ဘာ့ကြောင့် သူ့ထက် လူဦးရေနည်းပါးတဲ့ ဗြိတိသျှနိုင်ငံ၊ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေလက်အောက်ကို နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ လောက် ကျရောက်ခဲ့ရ သလဲ။ လူဦးရေအရ များပြားပေမယ့်၊ သူ့ကျွန်လက်အောက်ကို အချိန်အကြာကြီး ဘာ့ကြောင့် ရောက်ခဲ့ရတာလဲ။ ယဉ်ကျေးမှုအရ မြင့်မားခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ဟာ ဒီလောက်အချိန်အကြာကြီး ကိုလိုနီလက်အောက်မှာ၊ စေစားခံဘဝနဲ့ နေရတာကို ဘာ့ကြောင့် ရုန်းထွက်ဖို့ ခက်နေခဲ့ရသလဲ….။
▄ ဘယ်လို / ဘာ့ကြောင့်
အိန္ဒိယလိုပဲ၊ သူနဲ့ နီးစပ်ထိကပ်နေတဲ့ တရုတ်ပြည်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ။ တရုတ်ပြည်ဟာ လူဦးရေအား ဖြင့် များပြားတယ်။ တရုတ်တွေရဲ့ သမိုင်းတင်ပြီးယဉ်ကျေးမှုဟာ နှစ်ပေါင်း (၅၀၀၀) လောက်ရှိတယ်လို့ လေ့လာ ရတယ်။ လူဦးရေအားဖြင့်လည်း များပြားတယ်။ နယ်မြေအားဖြင့်လည်း ကျယ်ဝန်းတယ်။ အိန္ဒိယ (မဇ္ဈိမဒေသ) ဟာလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ။ နယ်မြေအားဖြင့် ကျယ်ဝန်း၊ လူဦးရေအားဖြင့် များပြား၊ ယဉ်ကျေးမှု သက်တမ်းအားဖြင့် ရှည်ကြာမြင့်မားပါလျက်နဲ့ ကိုလိုနီလက်အောက်ကို အချိန်အတော်ကြာ ကျရောက်နေခြင်း ထူးခြားသလို၊ အံ့ဩစရာလည်း ကောင်းတယ်။
တရုတ်၊ အိန္ဒိယနဲ့ နီးကပ်ထိစပ်နေတဲ့ မြန်မာပြည်လည်း ဘာထူးသလဲ….။ အင်္ဂလိပ်က ကိုလိုနီပြုတာကို နှစ်ပေါင်း (၁၀၀) ကျော် ခံခဲ့ရတာပဲ မဟုတ်လား။ အောက်မြန်မာပြည်၊ မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်း၊ အထက်မြန်မာပြည် တစ်ခုလုံး။ ကမ်းရိုးတန်းဒေသ၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသနဲ့ မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း တစ်စိတ်တစ်ဒေသ။ ပြီးတော့…. အထက်မြန်မာပြည်နဲ့ တောင်တန်းဒေသ အားလုံး။ ဒီလိုနဲ့ ကိုလိုနီစနစ်၊ သူ့ကျွန်လက်အောက်ကို ရောက်လာကြ တာပဲ မဟုတ်လား။ သူ့ကျွန်လက်အောက်ကို ကိုယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတည်း မဟုတ်ဘူး။ တခြားသောနိုင်ငံတွေ လည်း ကျရောက်တာပဲ။ ဒါဟာ ဆန်းသလား။
▄ ရီနေးဆန့်ခေတ် ဖြတ်ခဲ့သလား
ဗြိတိသျှ အင်္ဂလိပ်တွေဟာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံတည်း၊ အိန္ဒိယတစ်နိုင်ငံတည်းကို ကိုလိုနီပြုတာ မဟုတ်ဘူး။ တခြား သော နိုင်ငံအများအပြားကိုလည်း ကိုလိုနီပြုခဲ့တယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း နေမဝင် အင်ပါယာလို့ ခေါ်ဝေါ်ကြရတယ်။ အိန္ဒိယမှာလည်း မဂိုအင်ပါယာတို့၊ ဘာတို့ ရှိခဲ့တာပဲ။ အသောကဟာ နယ်မြေတွေကို ချဲ့ထွင်ခဲ့တာပဲ။ တရုတ်မှာ လည်း ရှီဝမ်တီက အကြီးမားဆုံး တရုတ်အင်ပါယာကြီးကို ချဲ့ထွင် စုစည်းခဲ့တာပဲ။ တရုတ်မှာ မွန်ဂိုဘုရင် ဂျင်ဂျစ်ခန်ကလည်း တရုတ်ဒေသတွင်းတစ်ခုလုံးတင် သာမက၊ ဥရောပဘက် အခြမ်းနားထိ ရောက်အောင် မြင်းတပ်နဲ့ နယ်မြေတွေကို ချဲ့ထွင်ခဲ့တာပဲ မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် ကိုလိုနီပြုကြတဲ့ အင်္ဂလိပ်တွေ၊ စပိန်တွေ၊ ပြင်သစ်၊ ဒတ်ချ်၊ ပေါ်တူဂီ၊ ရုရှား၊ အမေရိကန်၊ ဂျာမနီ…. စတဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ လက်အောက်မှာ ကိုလိုနီနိုင်ငံတွေက နှစ်ပေါင်းရှည်ကြာ အုပ်စိုးခံခဲ့ရတာလဲ။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့လဲ။ ဘာ့ကြောင့်လဲ….။ ဒီနိုင်ငံတွေကလည်း သူများနိုင်ငံ တွေအပေါ်မှာ ဘာ့ကြောင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကိုလိုနီပြုနိုင်ရသလဲ….။ အလကားပဲတင်းတော့ ရမှာ မဟုတ်။ အထူးသဖြင့် ကိုလိုနီပြုကြတဲ့ နိုင်ငံတွေ တော်တော်များများဟာ ဥရောပသားတွေ။ ဥရောပမှာ၊ ဉာဏ်အလင်းပွင့် ခေတ်ကို ဖြတ်ခဲ့တယ်။ ဥရောပမှာ စက်မှုတော်လှန်ရေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ အမှောင်ခေတ်ကို ရောက်ခဲ့တာလည်း ဥရောပပဲ။ အမှောင်ခေတ်ကို ဖောက်ထွက်နိုင်ခဲ့တာလည်း ဥရောပပဲ။
အာရှရဲ့ အမှောင်ခေတ်ဟာ ရှိနေတုန်းလား။ ရှိနေသေးလား။ အာရှမှာ အာရှအလင်းခေတ်။ တနည်း အာရှမှာ ဉာဏ်အလင်းခေတ် (ရီနေးဆန့်ခေတ်) ကို ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြီလား။ ရီနေးဆန့်ခေတ်ကို ရောက်အောင် လျှောက်ခဲ့ပြီးပြီ လား။ အာရှရဲ့ စက်မှုတော်လှန်ရေးဟာ ဘယ်အချိန်က၊ ဘယ်နေရာမှာ ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်ခဲ့သလဲ။ ဉာဏ်အလင်းခေတ်၊ စက်မှုတော်လှန်ရေး၊ လူမှုတော်လှန်ရေး…..။
▄ ဆန်ရင်း နာနာဖွတ်
ကိုလိုနီနိုင်ငံတွေ သယ်လာခဲ့တာက ဘာတွေလဲ။ ကိုလိုနီနိုင်ငံတွေကြောင့် ကောင်းကျိုး ရှိခဲ့သလား။ ဆိုးပြစ်တွေ ကတော့ မျိုးချစ်သမိုင်းတွေမှာ အထွေထွေ ၊ ဖန်တရာတေအောင် ဖတ်ခဲ့ရပြီးပြီ။ ကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နိုင်ငံတွေဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ အားနည်းချက်၊ ပျော့ကွက်တွေကို ခပ်နာနာရေးသားတင်ပြ ဖော်ထုတ်ကြမှ ကောင်းလိမ့်မယ်။ ဆန်ရင်းနာနာဖွတ်…ဆိုတဲ့သဘော။ အားနည်းချက်ကို မပြောရင် မသိဘူး။ ပျော့ကွက်ကို မဖော်ရင် မပြင်ချင်ဘူး။ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းခေတ်မှာ၊ တပ်မကြီးချီလာပြီး ကိုလိုနီပြုခံရတော့မှာ မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ပြုခံရလို့ ခံရမှန်း မသိအောင် ကျွန်ပြုခံကြရမှာပါ။ ခေတ်သစ်ကိုလိုနီဝါဒဟာ ပြောင်းလဲလာပြီ။
▄ ကိုလိုနီ စနစ် ဘယ်လို / ဘယ်ကဲ့သို့
ဗစ်စကိုဒဂါးမား တို့၊ ကိုလံဘတ်တို့ စလိုက်တာ…. ဥရောပသားတွေဟာ နယ်သစ်ပယ်သစ်တွေ ရှာပြီး၊ ဈေးကွက် ရှာ။ ရတဲ့နယ်မြေကို စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတော့ ကမ္ဘာအနှံ့ကို ရွက်လွှင့်ပြီး စွန့်စားသွားလာလိုက်ကြတာ။ ကိုလိုနီ စနစ်ဟာ ကမ္ဘာလုံးတစ်ခွင် ပြဲပြဲစင်အောင် ပတ်နေခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ ကိုလိုနီစနစ်ဆိုတာ၊ ပင်လယ်ပြင်ကို ရွက်လွှင့်။ နယ်သစ်ပယ်သစ်တွေ ရှာဖို့ စွန့်စားသွားလာ။ ဒီလိုလူတွေကနေ စတင်ခဲ့တာ။ စွန့်နိုင်တဲ့သူတွေ စားခွင့် ရတဲ့ စနစ်လို့ ပြောရင် ရနိုင်တယ်။ ကမ္ဘာမှာ ကိုလိုနီဝင်ရောက်မှုပုံစံကို ယေဘုယျချကြည့်ရင် အမ် သုံးလုံး (3M) ကို တွေ့နိုင်တယ်။
• Missionary (အစကနဦးမှာ – သာသနာပြုတွေ ဝင်လာတယ်)
• Merchants (နောက်တော့ – ကုန်သည်တွေ ဝင်လာပြန်တယ်)
• Military (နောက်ဆုံးမှာ – စစ်တပ်ဝင်လာတော့တာပဲ)
မြန်မာမှာလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း။ အိန္ဒိယမှာလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း။ တရုတ်မှာလည်း ထိုနည်း လည်းကောင်း။ ဖိလစ်ပိုင်မှာလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း။ အင်ဒိုနီးရှားမှာလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း။ အာဖရိကမှာလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း။
▄ သန်းခေါင်ယံ လွတ်လပ်ရေး
အိန္ဒိယဟာ သူ့ကျွန်လက်အောက်ကနေ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ လွတ်မြောက်ခဲ့ပါသလဲ။ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး နည်းနဲ့လား။ အကြမ်းမဖက်နည်းနဲ့လား။ အိန္ဒိယလို အယူဝါဒ မျိုးကွဲ စုံလင်တဲ့ တိုင်းပြည်မျိုးကို အင်္ဂလိပ်တွေဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဘယ်လို ဘယ်ပုံ အုပ်ချုပ်ခဲ့သလဲ။ အိန္ဒိယဟာ နယ်မြေအားဖြင့် ကြီးမားကျယ်ပြန့်တယ်။ လူဦးရေ အားဖြင့် များပြားတယ်။ ဘာသာရေးဂိုဏ်းဂဏ အစွဲ ကြီးမားတယ်။ ခွဲခြားအုပ်ချုပ်ခြင်းလို့ ခေါ်တဲ့ divide and rule ဆိုတဲ့ အရာတစ်ခုတည်းနဲ့ ကိုလိုနီကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ပြုနိုင်လို့ ရသလား။ ဒီတစ်ခုတည်းတော့ မဖြစ်တန်ရာ။ တခြားသော အကြောင်းရင်းတွေ ရှိနိုင်တယ်။
ကိုလိုနီစနစ်ကနေ သယ်ဆောင်လာတဲ့ အရာတွေ ရှိတယ်။ ခေတ်သစ် ဗြူရိုကရေစီ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို ကိုလိုနီ စနစ်က သယ်လာတယ်။ မြို့ပြတည်ဆောက်မှုစနစ်ကို ကိုလိုနီစနစ်က သယ်လာတယ်။ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွေကို ကိုလိုနီစနစ်က သယ်လာတယ်။ အစဉ်အလာပညာရေးကနေ ခေတ်သစ် ပညာရေးစနစ်ကို သယ်ဆောင်လာတာဟာ ကိုလိုနီစနစ်က ဖြစ်တယ်။ ကိုလိုနီစနစ်က ခွဲခြားဆက်ဆံမှု၊ အနှိမ်ခံရ မှု၊ သိမ်ငယ်မှု၊ သတ်ဖြတ်ညှင်းဆဲမှု၊ ဖိနှိပ်မှု၊ ခေါင်းပုံဖြတ်မှု၊ စစ်ပွဲ…. စတာတွေကိုလည်း သယ်လာတယ်။
သန်းခေါင်ယံလွတ်လပ်ရေး စာအုပ်ဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု သမိုင်းစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေးအတွက် ဘယ်လို တိုက်ပွဲတွေကို ဘယ်လို အကျဉ်းအကျပ် တွေထဲမှာ ရုန်းကန်ခဲ့ရသလဲဆိုတာကို ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်၊ အိန္ဒိယနဲ့ ပါကစ္စတန် အမွေခွဲ ဖြစ်စဉ်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်။ နယ်မြေအားဖြင့် ပိုင်းခြား လွတ်လပ်ရေးရယူရင်း၊ မဇ္ဈိမဒေသမှာ နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံ အပြိုင်ပေါ်ထွန်းလာခြင်းဖြစ်တယ်။ နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရေးနဲ့ အင်အားပြိုင်မှုတွေ။ လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းတွေ။ ဟိန္ဒူ၊ မွတ်ဆလင်နဲ့ ဆစ်လူမျိုးတွေအကြားမှာ လူမျိုးရေးသတ်ဖြတ်မှုတွေ။ မဇ္ဈိမဒေသတွင်းက ဒရမ်မာဇာတ်လမ်း။ မဇ္ဈိမဒေသကို နှစ်ပိုင်းခွဲတဲ့ ဇာတ်လမ်း။ ဧရာမလူဦးရေရွှေ့ပြောင်းမှုကြီး ဖြစ်လာတဲ့ ဇာတ်လမ်း။ Mega Migration လို့ခေါ်တဲ့ မထင်မှတ်ဘဲ၊ လူဦးရေသန်းနဲ့ချီ ရွေ့လာတဲ့ မဇ္ဈိမပထဝီ ဒေသပေါ်က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်ကြီး။ ဂန္ဓီရဲ့နှလုံးသားပေါ်မှာ အိန္ဒိယမြေပုံကို ခွဲထုတ်လိုက်တဲ့ ဇာတ်လမ်း။ သန်းခေါင်ယံလွတ်လပ်ရေးက ရင်ထဲစို့နင့်ခြင်း အတိနဲ့။ ဤသို့…. ဤပုံ။
မူရင်း စာရေးဆရာက နှစ်ယောက်။ တစ်ယောက်က အမေရိကန်။ တစ်ယောက်က ပြင်သစ်။ သူတို့ဟာ အိန္ဒိယရဲ့ သန်းခေါင်ယံ လွတ်လပ်ရေးကို ရေးဖို့၊ စာအုပ်တွေဖတ်ပြီး ပြန်ရေးခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ လူတွေကို တွေ့တယ်။ အဲသည့်တုန်းက ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ လူတွေကို လိုက်လံတွေ့ဆုံတယ်။ အင်တာဗျူးတွေ လုပ်တယ်။ အထူးသဖြင့်၊ အိန္ဒိယရဲ့ နောက်ဆုံး ဘုရင်ခံ မောင့်ဘတ်တန်ကို အင်တာဗျူးတွေ လုပ်တယ်။
မောင့်ဘတ်တန်က နေရူးကို ပြောတယ်။
• မစ္စတာနေရူး…. ကျွန်တော့်ကို ဗြိတိသျှအုပ်စိုးမှုကို အဆုံးသတ်မယ့် နောက်ဆုံး ဘုရင်ခံချုပ်အဖြစ် သဘောမထားစေချင်ဘူး။ အိန္ဒိယနိုင်ငံသစ်ဆီ လမ်းပြခေါ်ဆောင်သွားမယ့် ပထမဆုံး ဘုရင်ခံချုပ် အဖြစ်ဘဲ မြင်စေချင်တယ်။
စာရေးဆရာ နှစ်ယောက်ဟာ သန်းခေါင်ယံလွတ်လပ်ရေးကို ရေးသားပြုစုဖို့၊ တွေ့ဆုံသင့် တွေ့ဆုံထိုက်တဲ့လူ တွေဆီကို ကိုယ်တိုင်သွားပြီး လူချင်းတွေ့တယ်။ သက်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းတွေကို စုစည်းတယ်။ ဆွေးနွေးချက် မှတ်တမ်းတွေကို ရှာဖွေတယ်။ လူတွေ့အင်တာဗျူးကို လူပေါင်း ၃၀၀၀ နီးပါး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။ အချက်အလက်ရှာဖွေရေးအတွက် အချိန် (၄) နှစ်လောက် သုံးခဲ့ကြရတယ်။ ပြီးတော့ စာရေးဆရာ နှစ်ယောက် တိုင်ပင်ကြတယ်။ ဘယ်သူက ဘယ်အခန်းကို ရေးမလဲ။ သူတို့ စတင် မရေးမှီ၊ မာတိကာတွေကို စဉ်ကြတယ်။ အားလုံး အသေးစိတ် စဉ်တယ်။ မာတိကာ အသေးစိတ် စာရင်းကိုက စာမျက်နှာ ၃၆၀ ကျော်တယ်လို့ဆိုတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာအခန်းတွေကို ခွဲယူလိုက်ကြတယ်။ အမေရိကန်စာရေးဆရာက အင်္ဂလိပ်လို ရေးတယ်။ ပြင်သစ်စာရေးဆရာက ပြင်သစ်လို ရေးတယ်။ တစ်ယောက်ရေးပြီးသား စာကို တစ်ယောက်က ဘာသာပြန်တယ်။ ပြင်သစ်စာရေးဆရာ ရေးပြီးရင် အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာက အင်္ဂလိပ်လို ပြန်တယ်။ အင်္ဂလိပ် စာရေးဆရာ ရေးပြီးသားကို ပြင်သစ်စာရေးဆရာက ပြင်သစ်လို ပြန်တယ်။ သူတို့ရဲ့ အပြန်အလှန် ပူးပေါင်းရေး သားချက်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာ၊ သန်းခေါင်ယံလွတ်လပ်ရေးဟာ အင်္ဂလိပ်လိုရော၊ ပြင်သစ်လိုရော နှစ်အုပ်စလုံး တစ်ပြိုင်နက်တည်း ထွက်လာတယ်။ စာအုပ်က ဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်သွားတယ်။ အိန္ဒိယနဲ့ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွေမှာ၊ ဂယက်ရိုက်သွားတယ်။
သန်းခေါင်ယံလွတ်လပ်ရေးဟာ၊ (၄) ဦးသော ဇာတ်ကောင်ကို တည်ပြီး ရေးတယ်။ တစ်ယောက် မောင့်ဘတ်တန်။ မောင့်ဘတ်တန်က အင်္ဂလိပ် ကိုလိုနီဘက်က။ တစ်ယောက်က နေရူး။ အိန္ဒိယမျိုးချစ်နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်။ တစ်ယောက်က မွတ်ဆလင်ခေါင်းဆောင် ၊ ဂျင်းနား။ နောက်ဆုံး တစ်ယောက်က မဟတ္တမ ဂန္ဓီ။ နိုင်ငံရေးဇာတ်ကောင် လေးယောက်အကြားမှာ၊ အငြင်းအခုန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကွဲတွေ အကြောင်း။ နိုင်ငံကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ လွတ်လပ်ရေးယူကြမလဲဆိုတဲ့ နည်းနာလမ်းစဉ် မတူညီမှုတွေအကြား အကွာအဟ။ ယုံကြည်မှုနဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေအကြားမှာ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းကြတာတွေ။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အလျော့ပေး၊ ပြန်လည် တင်းမာရင်း ယုံကြည်ချက်နဲ့ ခံယူချက်၊ နည်းနာတို့အကြား မျှခြေညှိရတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ…. စတဲ့ အကြောင်းဖြစ်ရပ်တွေကို စုံစုံစေ့စေ့ နားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
နေရူး၊ ဂျင်းနား၊ ဂန္ဓီနဲ့ မောင့်ဘတ်တန်တို့အကြားမှာ ဘာတွေ ကွဲပြားသလဲ။ ဘယ်လို ကွဲပြားသလဲ။ အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယဘက်အခြမ်းမှာ ခြေစုံရပ်တဲ့ နေရူးဟာ ဘယ်လိုလူလဲ….။ နေရူးနဲ့ ဂန္ဓီအကြားက ဆက်ဆံရေးဟာ ဘယ်လိုလဲ…..။
▄ နေရူးဟာ ဘယ်လိုလူလဲ…
• နေရူးသည် တန်ခိုးက္ကဒ္ဓိပါဒ် စသော ဝိညာဉ်လောကကို အယူသီးလွန်းသောနိုင်ငံမှ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင် တုံတရားကို မြတ်နိုးသော တော်လှန်ရေးသမားတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ပုဏ္ဏားဖြူ၊ ပုဏ္ဏားညို ဗေဒင်ဟူးရား ပညာရပ်များ ထွန်းကားသောနိုင်ငံတွင် သိပ္ပံပညာကို အစားထိုးလိုသော နိုင်ငံခေါင်းဆောင် ဖြစ်သည်။ ဘာသာရေး အစွဲအလမ်းကြီးလှသော နိုင်ငံတွင် ဘာသာရေး၏ အားနည်းချက်ကို ထောက်ပြသော ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်သည်။ (မောင်ပေါ်ထွန်း၊ စာ – ၉၇)
• နေရူးသည် စကားပြောလည်း ကောင်းသည်။ စာရေးလည်း ကောင်းသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း သူ့အား ပြည်သူတွေက ပို၍ စွဲကြခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည်နိုင်ငံရေးလောကသို့ ဝင်စဉ်မှစ၍ မဟတ္တမဂန္ဓီ၏ သွန်သင်နည်းပြမှုကို ရခဲ့သည်။ ဂန္ဓီ၏ လမ်းညွှန်မှုကြောင့်ပင်လျှင် သူသည် ကွန်ဂရက်အဖွဲ့တွင် ခေါင်းဆောင်ပိုင်းသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ (မောင်ပေါ်ထွန်း၊ စာ – ၉၇)
• ဂန္ဓီသည် နေရူး၏ ဂုရု ဖြစ်သည်။ ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာ ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်စိတ်ပေါက်နေသော အင်္ဂလန်ပြန် လူချောလူလှ ဗြာဟ္မဏလုလင်ပျို နေရူးအား အိန္ဒိယသားစစ်စစ် ပြန်ဖြစ်လာအောင် လုပ်သူမှာ ဂန္ဓီပင် ဖြစ်သည်။ ဂန္ဓီက နေရူးအား နိုင်ငံအနှံ့သို့ ခရီးထွက်စေပြီး အမိနိုင်ငံ၏ ဘဝမှန်ကို မြင်အောင် ပြခဲ့သည်။ ဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေသော အမိနိုင်ငံကို ကြင်နာမြတ်နိုးစိတ်ပေါ်လာအောင် ပြခဲ့သည်။ (မောင်ပေါ်ထွန်း ၊ စာ – ၉၇)
နေရူးဟာ အိန္ဒိယမျိုးချစ်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ လစ်ဘရယ်အမျိုးသားရေးဝါဒီ တစ်ယောက် ဖြစ်တယ်။ အနောက်တိုင်း ပညာတတ် ဘွဲ့ရ ဗြာဟ္မဏလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ နေရူးဟာ ထောင်ထဲမှာ ရှိနေစဉ်၊ စာအုပ်အတော်များများကို ရေးခဲ့တယ်။ နေရူးရေးခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေက ကမ္ဘာကျော်တယ်။ နေရူးက ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိ။ အိန္ဒိယကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း။ လျှပ်တပြတ် ကမ္ဘာ့သမိုင်း ကမ္ဘာ့သမိုင်း… စတဲ့ ကမ္ဘာကျော်စာအုပ်တွေကို ရေးခဲ့တယ်။ နေရူးဟာ အိန္ဒိယကို လွတ်လပ်ရေးရအောင် လုပ်ပေးခဲ့တာ မှန်တယ်။ ဒါပေမယ့် နေရူးကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယလွတ်လပ်ရေးအတွက် အမျိုးသားရေးဝိညာဉ်ကို စုစည်းပေးခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် နှစ်ယောက်ကတော့ မဟတ္တမ ဂန္ဓီနဲ့ ရော်ဗင်နတ် တဂိုးတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
▄ နေရူးရဲ့ မှတ်ချက်
နေရူးဟာ သူ့ရဲ့ အိန္ဒိယကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း စာအုပ်မှာ…. ဂန္ဓီနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခုလို မှတ်ချက်ပေးတယ်။
• ဂန္ဓီသည် အိန္ဒိယအကြောင်းကို သိနားလည်၏။ အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယပြည်သူတို့အကြောင်း ကောင်းကောင်းသိ၏။ ရှေးကသော်လည်းကောင်း၊ ယခုခေတ်၌သော်လည်းကောင်း၊ သူသိသလို သိသူရှိဦးတော့ အလွန်နည်းပါး၏။ သူသည် အိန္ဒိယတွင် နေရာအနှံ့ရောက်ပြီး လူထုသန်းပေါင်းများစွာ နှင့် တွေ့ဆုံဖူးရုံမျှမကပါ။ သူနှင့် လူထု တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်းဖြစ်အောင်၊ စိတ်စိတ်ချင်း ငြိအောင် လုပ်နိုင်သော သတ္တိထူး တစ်ခု သူ့မှာ ရှိသည်။ ဂန္ဓီသည် လူထုထဲ ဝင်ရောပြီး သူတို့လို ခံစား၏။ ဤအကြောင်းကို လူထုက သိပြီး သူ့ကို လေးစားကြည်ညိုသည်။ သူ့အပေါ် သစ္စာထား၏။ ဂန္ဓီသည် အတွေးအခေါ်နှင့် သမိုင်းမှ အကောင်းဆုံးအမြင်ကို ရွေးထုတ်သည်။ သူ၏ အမြင်တွင် အကြမ်းမဖက်ရေး (အဟိံသ) သည် အိန္ဒိယအတွေးအမြင်နှင့် သမိုင်းတွင် အကောင်းဆုံး အခြေခံတရား ဟု ရှုမြင်သည်။ (ဘိုးလှိုင်၊ အိန္ဒိယကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း၊ ၂၀၀၉၊ စာ – ၃၈၈)
အိန္ဒိယနဲ့ နေရူးဟာ တတွဲတွဲ ရှိနေတယ်။ ထိုနည်းလည်းကောင်း ဂန္ဓီကလည်း အိန္ဒိယနဲ့ တပူးတွဲတွဲပါပဲ။ မြန်မာဟာ အိန္ဒိယနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအားဖြင့် ဆက်စပ်နေတယ်။ ဘာသာရေးအားဖြင့်လည်း ဆက်စပ်နေတယ်။ နိုင်ငံရေးအားဖြင့်လည်း ဆက်စပ်နေပြန်တယ်။ မြန်မာပြည်ကို ဗြိတိသျှ အင်္ဂလိပ်က အိန္ဒိယရဲ့ပြည်နယ်ခွဲ တစ်ခု အနေနဲ့ ထည့်သွင်းပြီး အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။ မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုအတွက် အင်္ဂလန်ကို ဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်းက သွားတော့၊ အိန္ဒိယက နေရူးဆီကို ခဏ ဝင်တယ်။ အင်္ဂလန်က သိပ်ချမ်းအေးတော့၊ အဝတ်တစ်ထည် ကိုယ်တစ်ခုနဲ့ အင်္ဂလန်ကို ဝန်ကြီးချုပ် အီတလီနဲ့ သွားတွေ့မယ့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို နေရူးက၊ လောင်းကုတ် အင်္ကျီကြီး တစ်ထည် ပေးလိုက်တယ်။ အိန္ဒိယနဲ့ မြန်မာဟာ အဲသည့်ကတည်းက နွေးထွေးနေခဲ့တာ။ မြန်မာပြည် က ဒီမိုကရက်တစ်အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ၊ ဂန္ဓီရဲ့ အကြမ်းမဖက်ရေး လမ်းစဉ်ကို စွဲစွဲမြဲမြဲလျှောက်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ အိန္ဒိယပြည်သူတွေအပေါ် နှလုံးသားကို ညို့ယူစွဲငင်နိုင်တဲ့ ဂန္ဓီဟာ ဘယ်လိုလူလဲ…..။
▄ ဂန္ဓီဟာ ဘယ်လိုလူလဲ….
ဂန္ဓီဟာ အိန္ဒိယ အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင် မဟုတ်ဘူး။ ဂန္ဓီဟာ နိုင်ငံရေးအာဏာကို ဆုပ်ကိုင်ထားသူ မဟုတ်ဘူး။ ဂန္ဓီဟာ အိန္ဒိယအစိုးရအဖွဲ့ ဥသျှောင်လည်း မဟုတ်ဘူး။ ဂန္ဓီဟာ ဘာနိုင်ငံရေးအာဏာကိုမှ ဆုပ်ကိုင် ထားသူ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဂန္ဓီဟာ အိန္ဒိယတစ်နိုင်ငံလုံးအပေါ် နိုင်ငံရေးဩဇာ အပြည့်လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်တယ်။ အာဏာနဲ့ ဩဇာ။ ဒီနှစ်ရပ်မှာ နေရူးဟာ အိန္ဒိယရဲ့ နိုင်ငံရေးအာဏာ။ ဂန္ဓီဟာ အိန္ဒိယရဲ့ နိုင်ငံရေးဩဇာ။ အိန္ဒိယပြည်သူလူထုအပေါ်မှာ အကြွင်းမဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သူဟာ ဂန္ဓီသာ ဖြစ်တယ်။ ဂန္ဓီဟာ နည်းနာအမှားတွေကို လျှောက်ခဲ့ကောင်း လျှောက်ခဲ့လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဂန္ဓီရဲ့ မဟာဗျူဟာဟာ မမှားယွင်းခဲ့ ဘူး။ ဂန္ဓီရဲ့ အန္တိမပန်းတိုင်ဟာ မလွဲမှားခဲ့ဘူး။ ဒါကို သမိုင်းက သက်သေပြခဲ့တယ်။ ဂန္ဓီ့သားတပည့် နေရူးဟာ လည်း သူရေးခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေမှာ၊ ဒီအချက်ကို ထပ်ခါတလဲလဲ ထောက်ခံခဲ့တယ်။ နေရူးနဲ့ ဂန္ဓီဟာ နည်းနာအား ဖြင့် သဘောထားကွဲလွဲခဲ့တာတွေ အများကြီး ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့နှစ်ဦးအကြားက ဆက်ဆံရေးဟာ ကြားလေမဝင်နိုင်အောင် စေးကပ်ကျစ်လစ်ခဲ့တယ်။ မေတ္တာတရားနဲ့ ချည်နှောင်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ၊ နေရူးနဲ့ ဂန္ဓီအကြားမှာ တည်ရှိနေခဲ့တယ်။ ဂန္ဓီဟာ personal power လို့ခေါ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဩဇာ ကြီးမားတဲ့ လူတစ် ယောက်ဖြစ်တယ်။ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ အိန္ဒိယပြည်သူတွေရဲ့ နှလုံးသည်းပွတ်ကို စုစည်းခေါ်ဆောင်နိုင် တဲ့သူဖြစ်တယ်။ ဂန္ဓီဟာ positional power လို့ခေါ်တဲ့ ရာထူးဌာနန္တရကနေ ရတဲ့ ဩဇာမျိုးကို ယူခဲ့သူ မဟုတ်ဘူး။
• ကျုပ်အလောင်းပေးမှာပဲ အိန္ဒိယကို ခွဲလို့ ရမယ်။ ကျုပ်အသက်ရှင်နေသရွေ့ အိန္ဒိယကို နှစ်ခြမ်းခွဲဖို့ ဘယ်နည်းနဲ့မှ သဘောမတူဘူး။ (မင်းကျော်စွာ၊ စာ – ၁၄၀)
• ချည်ကြမ်းအဝတ်စ တစ်စက လွဲ၍ သူ့လုံးတီးကိုယ်ပေါ်မှာ ဘာမှ တင်လေ့ မရှိသူ အိန္ဒိယလူမျိုး အဖိုးအို။
• အကြမ်းမဖက်ရေး အားပေးသူ။
• ဂန္ဓီက လူကို လူတန်းစားမဲ့ သာတူညီမျှ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ နေစေချင်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေး မညီမျှမှုသည် အကြမ်းဖက်မှုကို ပေါက်ဖွားစေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဂန္ဓီ၏ အိန္ဒိယတွင် အလုပ်ဟူသမျှ ကာယအလုပ်ဖြစ်ဖြစ်၊ ဉာဏ်အလုပ်ဖြစ်ဖြစ် ဆုလာဘ်က အတူတူဖြစ်သည်။ သူ၏နိုင်ငံတွင် ဥစ္စာပစ္စည်းသည် မဲပေးခွင့်ရစေမည့် အရည်အသွေး မဟုတ်။ အလုပ်သည်သာ အရည် အသွေးဖြစ်သည်။ ယင်းအရည်အသွေးရှိဖို့ လူတိုင်း နိုင်ငံတော်ကို ကာယအလုပ်အကျွေးဖြင့် ပေးဆပ်ရ မည်။ (မင်းကျော်စွာ၊ စာ – ၂၆၃)
• ဂန္ဓီ၏ အိန္ဒိယကို ကျေးရွာခြောက်သိန်းပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသည်။ ယင်းကျေးဂွာ တစ်ခုစီသည်၊ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကျေးရွာများဖြစ်သည်။ ကိုယ့်အစားအစာ၊ အဝတ်အထည်၊ နို့၊ သစ်သီး၊ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်တို့ကို ကိုယ့်ဘာသာ ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ကိုယ့်သားသမီးများကို ကိုယ့်ဘာသာ ပညာသင်ပေး ပြုစုပေးနိုင်သည်။ ဂန္ဓီက ဆင်းရဲမှုကို လျော့ချခြင်းနှင့် ကုန်ပစ္စည်းကို အဆင်ခြင်မဲ့ သုံးစွဲခြင်းကြားမှာ ရှိစေချင်သည်။ (မင်းကျော်စွာ၊ စာ -၂၆၂)
ဂန္ဓီဟာ ဘယ်လိုလူလဲ။ ဂန္ဓီဟာ နိုင်ငံရေးသမားလား။ သို့တည်းမဟုတ်၊ လူမှုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားလား။ ဂန္ဓီ ဟာ အိန္ဒိယမှာ၊ အခြေခံလူမှုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကို လုပ်ခဲ့တာကိုတော့ မငြင်းနိုင်ဘူး။ အထူးသဖြင့်၊ ဂန္ဓီဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အခြေခံယူနစ်ဖြစ်တဲ့ ကျေးရွာတွေကို အခြေခံပြီးတော့၊ အမူအကျင့်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ စိတ်ဓာတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကို လုပ်ခဲ့တယ်။ ဘယ်လို အမူအကျင့်တွေလဲ။ လူဦးရေသန်းပေါင်းများစွာရှိတဲ့ အိန္ဒိယ အခြေခံအမူအကျင့်တွေဟာ ခေတ်နောက်ကျနေသေးတယ်။ အထူးသဖြင့်၊ ကျေးရွာတွင်း သန့်ရှင်းရေးကို ဘယ်လို လုပ်ကြရမလဲဆိုတာကို နားမလည်ဘူး။ ဂန္ဓီဟာ ကျေးရွာတွေကို အခြေခံယူနစ်အဖြစ် ယူဆပြီး ကျေးရွာ တွေ စည်ပင်သာယာရေးကို နှိုးဆော်တယ်။ သင်ကြားပေးတယ်။ ရေတွင်းရေကန်ကို ဘယ်လို သန့်ရှင်းအောင် ထားရမလဲ။ အိမ်သာတွေကို ဘယ်လို ထားမလဲ။ အိမ်သာကျင်းကို သူကိုယ်တိုင်တောင် လိုက်တူးပေးခဲ့သေး တယ်။ ရွာတွေထဲက လူတွေ မစင်ကို ဘယ်လို စွန့်ရမလဲဆိုတာက အစ။ အိန္ဒိယလူထုကို ဂန္ဓီက သင်ပေးခဲ့တယ်။
အိန္ဒိယမှာ၊ မွတ်ဆင်လင် လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ဟိန္ဒူလူ့အဖွဲ့အစည်းအကြားမှာ ပဋိပက္ခရှိတယ်။ အကြမ်းမဖက် သောနည်းနဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းကို ဂန္ဓီက သတိပေးဟောကြားတယ်။ ဟိန္ဒူနဲ့ မွတ်ဆလင်အကြား သွေးစည်းချစ်ကြည်ရေး၊ ညီညွတ်ရေးဖြစ်အောင် သူ ကြိုးစားတယ်။ တစ်ရွာပြီး တစ်ရွာ ဖြတ်ပြီးတော့၊ ဂန္ဓီက အကြမ်းမဖက်ရေးတရား၊ အဟိံသတရားကို ဟောကြားတယ်။ ဂန္ဓီဟာ အဟိံသခရီးသည်ကြီး ဖြစ်တယ်။
ဂန္ဓီဟာ သူ့တစ်သက်လုံး၊ ကိုလိုနီကျွန်သပေါက်အောက်ကနေ အိန္ဒိယနိုင်ငံ လွတ်မြောက်ဖို့ ရည်မှန်းချက်ထားခဲ့ တယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံလွတ်မြောက်ရေးအတွက် နှစ်ပေါင်း (၃၀) လုံးလုံး မရပ်မနား တစ်ရွာပြီး တစ်ရွာ ခရီးတွေ သွားရင်း၊ တရားတွေ ဟောခဲ့တယ်။ ကိုလိုနီအင်္ဂလိပ်ကို အကြမ်းမဖက်ရေးလမ်းစဉ်နဲ့ ပြည်သူ့အာဏာဖီဆန်ရေး တွေနဲ့ သပိတ်တွေကို ခေါင်းဆောင်လှုံ့ဆော်တဲ့အခါမှာ၊ ဂန္ဓီကို ဗြိတိသျှအစိုးရက ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတယ်။ ဒါကိုလည်း ဂန္ဓီက မမှု။ သူ့ယုံကြည်ချက်အတွက် အစာငတ်ခံပြီးတော့တောင် ဆန္ဒပြခဲ့သေးတယ်။ ဂန္ဓီဟာ သည်လိုလူ။
• သူ့သတ္တိမှာ၊ အခြား မဟုတ်။ အကြမ်းမဖက်ရေးသတ္တိဖြစ်သည်။ အကြမ်းမဖက်ရေးဝါဒီ တစ်ဦးအဖို့ အကြမ်းဖက်ခံရခြင်းသည် မလွဲမသွေကြုံရမည့် ဒုက္ခဖြစ်သည်။ ဤဒုက္ခကို ခံနိုင်ရမှာ အကြမ်းမဖက်ရေး ဝါဒီ၏ အဓိကပန်းတိုင်ဖြစ်သည်…. (မောင်ပေါ်ထွန်း၊ စာ – ၆၉)
မောင့်ဘတ်တန်နဲ့ နေရူးအကြား သဘောထား
• သက်တမ်းသုံးထောင်ရှိ ကက်ရှမီရီ ဗြာဟ္မဏမျိုးနွယ်မှ ဆင်းသက်လာသော နေရူး။
• ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှေးအကျဆုံး ပရိုတက်စတင့် ဘာသာဝင် ဧကရာဇ်မျိုးရိုးမှ ဆင်းသက်လာခဲ့သူ မောင့်ဘတ်တန်။
• အတွေးသမားဖြစ်သူ နေရူးက လက်တွေ့သမားဖြစ်သူ မောင့်ဘတ်တန်ကို ခင်မင်သည်။ မောင့်ဘတ်တန်က နေရူး၏ သိမ်မွေ့နက်နဲသော အတွေးအခေါ်များကို လေးစားသည်။ နေရူးသည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသစ်တို့၏ မေတ္တာမပျက် ဆက်လက်ချစ်ကြည်မှု ရရှိအောင် ဆောင်ကြဉ်း နိုင်မည့် တစ်ဦးတည်းသော အိန္ဒိယ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် ဖြစ်သည်ဟု မောင့်ဘတ်တန်က ယုံကြည်သည်။ (မောင်ပေါ်ထွန်း၊ စာ – ၉၈)
မောင့်ဘတ်တန်ဟာ ဗြိတိသျှတော်ဝင်မျိုးရိုးက ဆင်းသက်သူ။ ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်။ ဝန်ကြီးချုပ်အက်တလီ တာဝန်ပေးခြင်းခံရတဲ့ အိန္ဒိယရဲ့နောက်ဆုံး ဘုရင်ခံချုပ်။ ဒါပေမယ့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသစ်အတွက် ပထမဆုံး ဘုရင်ခံ ချုပ်နေရာမှာ သူ့ကိုယ်သူ သဘောထားခဲ့သူ။ မောင့်ဘတ်တန်လက်အောက်မှာ၊ အိန္ဒိယမြေပုံကို အစ္စလာမ်မစ် နိုင်ငံတစ်ခုအတွက် မြေပုံခွဲပေးခဲ့သူ။ အစကနဦးမှာ၊ အိန္ဒိယမှာ မြေပုံခွဲတစ်ခု။ အဲဒါက ပါကစ္စတန်။ နောက် စစ်အေးကာလအတွင်းမှာ နောက်ထပ် မြေပုံသစ် တစ်ခု။ အဲဒါက ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်။ အရှေ့ပါကစ္စတန်။ အနောက် ပါကစ္စတန်။ ကိုလိုနီရဲ့ အကျိုးဆက်မှာ၊ မြေပုံပိုင်းခြားခြင်းတွေ ပါလာတယ်။ နိုင်ငံသစ်တွေ ပေါ်ထွက်လာခြင်း လား။ သို့တည်းမဟုတ်…. နိုင်ငံတွေ ခွဲထွက်ရေးလား…။
မင်းကျော်စွာရဲ့ သန်းခေါင်ယံ အိန္ဒိယလွတ်လပ်ရေး စာအုပ်။ မောင်ပေါ်ထွန်း ဘာသာပြန်တဲ့ သန်းခေါင်ယံ လွတ်လပ်ရေး စာအုပ်။ ဒီနှစ်အုပ်မှာ မောင်ပေါ်ထွန်းရဲ့ ဘာသာပြန်ချက်ဟာ ပိုပြီး စုံလင်တယ်။ ကျော်ခွတာ မျိုး၊ ဖော့လိုက်တာမျိုး မတွေ့ရဘူး။ အချက်အလက်အားဖြင့် ပိုပြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရှိတယ်။ စကားလုံးအားဖြင့် တိတိကျကျ ဘာသာပြန်တာကို ကောင်းကောင်းတွေ့ရတယ်။ မင်းကျော်စွာရဲ့ ဘာသာပြန်ကို အရင်ဆုံး ဖတ်မိတယ်ဆိုပေမယ့်၊ တချို့သောအပိုင်းတွေကို ပိုပြီး တိတိကျကျ များများစားစား တွေ့ချင်ရင်၊ မောင်ပေါ်ထွန်း ဘာသာပြန်ချက်ကို ပြန်လှန်ရတယ်။ ဘာသာပြန်စာလုံးအရေအတွက်အားဖြင့်လည်း မောင်ပေါ်ထွန်းဘာသာပြန်ချက်က ပိုတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မောင်ပေါ်ထွန်းရဲ့ ဘာသာပြန်ချက်ကို ပိုကြိုက်တယ်။
မောင်ပေါ်ထွန်းရဲ့ ဘာသာပြန်ချက်ဟာ ပိုလို့ ပြည့်စုံ၊ တိကျ၊ လိုရင်းရောက်၊ ချောမော၊ မထောက်၊ မတောင့်၊ ပြေပြစ်လှတယ်။ မောင်ပေါ်ထွန်းဟာ ဘာသာပြန်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်လွန်းလှတယ်။ မင်းကျော်စွာရဲ့ နာမည် အရင်းက ဦးဝင်းတင်။ ဦးဝင်းတင်က ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင် မဟုတ်ဘူး။ ဦးဝင်းတင်နဲ့ ရန်ကုန်မှာ ကျနော် ဆုံခဲ့တုန်းက၊ သူ့နာမည်နဲ့ ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် နာမည်ကို လူတွေက မှားကြလွန်းလို့၊ နောက်စာအုပ်တွေမှာ မင်းကျော်စွာ နာမည်နဲ့ စာအုပ်တွေ ထုတ်တယ်လို့ ပြောခဲ့ဖူးတယ်။ ဦးဝင်းတင်က ကျောင်းဆရာအဖြစ် တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာ တစ်ယောက်။ အင်္ဂလိပ်စာ ဆရာလို့ ပြောရင် ပိုမှန်လိမ့်မယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကားနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ စာအုပ်တွေ ထုတ်ဝေခဲ့ဖူးတယ်။ ဂလိုဘယ် အင်္ဂလိပ် မဂ္ဂဇင်းကိုလည်း ထုတ်ဝေ တဲ့သူဖြစ်တယ်။ မင်းကျော်စွာရဲ့ ဘာသာပြန်ချက်ဟာ မညံ့ပါ။ ဒါပေမယ့် မောင်ပေါ်ထွန်းရဲ့ ဘာသာပြန်ချက် နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် မောင်ပေါ်ထွန်းရဲ့ ဘာသာပြန်ချက်ဟာ ပိုပြည့်စုံတယ်၊ ပိုတိကျတယ်၊ ကျော်မှု ခွမှု နည်းတယ်လို့ ပြောလို့ ရနိုင်တယ်။
မောင်ပေါ်ထွန်းဟာ ဘာသာပြန်စာပေ အမြောက်အမြား ရေးခဲ့သူဖြစ်တယ်။ မောင်ပေါ်ထွန်းရဲ့ အရေးအသားနဲ့ ကျနော်ဟာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းက ရင်းနှီးခဲ့တယ်။ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ တက်ကျမ်းနဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိတွေ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ ကြီးပွားရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက် စာအုပ်တွေကို မောင်ပေါ်ထွန်းဘာသာပြန်တာ ဖတ်ရတယ်။ ဘာသာပြန်ဆရာတွေထဲမှာ၊ ကျနော် အကြိုက်နှစ်သက်ဆုံး သော ဘာသာပြန်ဆရာတွေထဲက တစ်ယောက်။ ကျနော် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝ နောက်ဆုံးနှစ် လောက်က ဦးဝင်းတင် (English for All) အမည်နဲ့ ကိုယ်သာလျှင် ကိုယ့်ဘဝသခင် ဘာသာပြန်စာအုပ်ကို ဖတ်ရပြီး ကြိုက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း မင်းကျော်စွာ ကလောင်နဲ့ ဘာသာပြန်တဲ့ စာအုပ်တွေကို ထပ်ပြီး ဝယ်ဖတ်ဖြစ်တယ်။ မင်းကျော်စွာရဲ့ ဟင်နရီကစ်ဆင်းဂျား စာအုပ် On China ဘာသာပြန်၊ တရုတ် အကြောင်း စာအုပ်။ နောက်တော့….မင်းကျော်စွာရဲ့ ဥက္ကဌကြီးမော်။ နောက်တစ်အုပ်က…. နယ်လ်ဆင်မင်ဒဲ လားရဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိကို ဘာသာပြန်တဲ့စာအုပ်။ ဒီစာအုပ်တွေကို ကျနော်သဘောကျတယ်။ ကြိုက်တယ်။ ဒီနေ့ခေတ် ပေါပေါပဲပဲ ဘာသာပြန်ချက်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် အများကြီးသာလွန်တဲ့ ဘာသာပြန် စာအုပ်တွေ ဖြစ်လို့ ကျနော် မဖြစ်မနေ စုဆောင်းဖတ်တယ်။
မင်းကျော်စွာရဲ့ အမည်ရင်းက ဦးဝင်းတင်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၈ ဖွား။ ရန်ကုန်သား။ အဖ ဦးတင်မောင်၊ အမိ ဒေါ်အုန်းတင်။ ၁၉၆၅ မှာ၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်တယ်။ ၁၉၇၀ မှာ ပညာရေးတက္ကသိုလ်ကနေ ဘီအီးဒီဘွဲ့ ရတယ်။ ကျောင်းဆရာအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးတယ်။ စစ်ပြန်၊ ငွေတာရီ၊ မြဝတီ၊ ပညာ တန်ဆောင် မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ပာာရေးဆောင်းပါးတွေ၊ ဝတ္ထုတွေကို အောင်စံဖြိုး အမည်နဲ့ ရေးခဲ့တယ်။ ၁၉၉၀ မှာ လောကသစ်စာပေကို ထူထောင်တယ်။ လောကသစ်စာပေကနေ စာအုပ်ကောင်းတွေ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ တယ်။
ဘာသာပြန်ဆရာ မောင်ပေါ်ထွန်းကို ၁၉၃၅ ခုနှစ်မှာ မွေးတယ်။ အမည်ရင်းက ဦးခင်မောင်စိုး။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မာန်အောင်မြို့၊ ရေမျက်ဝရွာ ဇာတိ။ အဖ ဦးမောင်ပု၊ အမိ ဒေါ်အေးသာ။ ၁၅ နှစ်သားမှာ ရန်ကုန်ကို ရောက်လာတယ်။ ၁၉၅၅ မှာ စာပေဗိမာန်မှာ၊ လက်ရေးတိုစာရေး ဝင်လုပ်တယ်။ ၁၉၇၃ မှာ၊ သမိုင်းနဲ့ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရတယ်။ ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှာ၊ စာပေဗိမာန်စာအုပ်အသင်း ကြီးကြပ်ရေးမှူး တာဝန်ကနေ အနားယူခဲ့တယ်။ ၁၉၆၇ ခုနှစ်၊ ငွေတာရီ မဂ္ဂဇင်း၊ စာအုပ်လောကကဏ္ဍမှာ (၆) နှစ်နီးပါးလောက် စာတွေ ဆက်တိုက်ရေးသားခဲ့တယ်။ ဓနစီးပွားရေးမဂ္ဂဇင်း၊ ချယ်ရီမဂ္ဂဇင်း၊ ပန်မဂ္ဂဇင်းနဲ့ စာအုပ်လောကစာစောင်တွေ မှာ၊ အယ်ဒီတာ၊ အယ်ဒီတာချုပ်၊ အတိုင်ပင်ခံအယ်ဒီတာ တာဝန်တွေ ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ ဘာသာပြန် စာအုပ် အများအပြား ထွက်ရှိပြီးဖြစ်တယ်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ၊ ကန္တရစမ်းရေအိုင် စာအုပ်၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ ကံကြမ္မာအကျဉ်းသား စာအုပ်တွေနဲ့ (ဘာသာပြန် – ရသ) အမျိုးသားစာပေဆုတွေကို ရရှိခဲ့တယ်။ ၂၀၁၅ မှာ အမျိုးသားစာပေ တစ်သက်တာဆု ရရှိခဲ့တယ်။
သန်းခေါင်ယံလွတ်လပ်ရေးစာအုပ်က ကျနော့်ကို ဆွဲဆောင်ခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံလေ့လာရေး (India Study)။ တနည်း မဇ္ဈိမဒေသလေ့လာရေးကို လုပ်ဖို့ အစပေါင်းများစွာ ဆွဲထုတ်ပေးခဲ့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းကြောင်းနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ အိန္ဒိယ။ အိန္ဒိယဆီကနေ ယဉ်ကျေးမှုအမွေ၊ ဘာသာရေးအမွေ အမြောက် အမြားကို မွေးစားယူထားတဲ့ မြန်မာ။ အိန္ဒိယ – မြန်မာရဲ့ သမိုင်းကြောင်း ဆက်စပ်မှု။ နယ်စပ်ချင်း ထိစပ်မှု။ နှစ်နိုင်ငံအကြား ယဉ်ကျေးမှု၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ကာကွယ်ရေး၊ လုံခြုံရေး၊ နှစ်နိုင်ငံ သံတမန်ဆက်ဆံရေး၊ လူမှုအတွေးအခေါ်ဒဿန ထိစပ်ပေါင်းစည်းမှု…. စတာတွေဟာ နက်နက်နဲနဲ လေ့လာရမယ့် သမိုင်းကြောင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သန်းခေါင်ယံလွတ်လပ်ရေးဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှု အကျပ်အတည်းနဲ့ အိန္ဒိယ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတါင်းက ပဋိပက္ခတွေ၊ အကွဲအပြဲတွေနဲ့ နယ်မြေလုပွဲတွေ၊ အာဏာခွဲဝေရေးနဲ့ အိန္ဒိယ – ပါကစ္စတန် နိုင်ငံပိုင်းခြားအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေ အပါအဝင်၊ ဂန္ဓီလမ်းစဉ်၊ နေရူး မူဝါဒနဲ့ ဂျင်းနားရပ်တည်ချက်၊ မောင်ဘတ်တန်ရဲ့ ကြားဝင်စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး မြင်နိုင် လေ့လာနိုင်တဲ့ စာအုပ်ဖြစ်တယ်။
ည ၁၀း၀၂
၂၉ ၊ ဧပြီ ၊ ၂၀၂၁
Tagged Book Review, Case Study, Historical View, History, India, Political History
Previous post ▄ သာသနာ့အာဇာနည်
Next post ထွက်ပေါက်မဟာဗျူဟာ အယူအဆ